प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रोपटक डायलाइसिस, कस्तो छ स्वास्थ्यअवस्था ? – Health Post Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रोपटक डायलाइसिस, कस्तो छ स्वास्थ्यअवस्था ?
२०७६ कार्तिक ३० गते २२:०३
बेडमा उठेर बस्ने भए प्रधानमन्त्री ओली, उभिएर हिँड्न केही दिन लाग्ने
प्रधानमन्त्रीले कुरै नबुझी सरकारी अस्पताललाई पखालेर निजीको महिमागान गरेको त्यो क्षण…
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो डायलाइसिस, पुनः प्रत्यारोपणबारे छलफल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तेस्रोपटक डायलाइसिस गरिएको छ । शनिबार बिहान स्वास्थ्योपचारका लागि धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको दिउँसो हेमोडायलाइसिस गरिएको थियो । डायलाइसिसपछि उनी शनिबार नै बालुवाटारस्थिति सरकारी निवास फर्किएका छन् ।
डायलाइसिसपछि उनको स्वास्थ्यअवस्था राम्रो रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सकसमेत रहेकी वरिष्ठ मिर्गौलारोग विशेषज्ञ एवम् ग्रान्डी अस्पतालकी नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. दिव्या सिंह शाह, ग्रान्डीका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे र युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट विभागका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको तेस्रो हेमोडायलाइसिस र त्यसपछिको स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् ।
प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले अरुको अंग भएको चिनेसँगै त्यसलाई रिजेक्ट गर्न शरीरमा एन्टिबडीलगायतको उत्पादन बढाउन थाल्ने हुँदा समस्या सुरु हुने मिर्गौलारोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । शरीरले अरुको अंगलाई नचिनोस् भन्नका लागि प्रत्यारोपणका बिरामीलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने औषधि नियमित खुवाउने गरिन्छ । तर, प्रत्यारोपणको लामो समयपछि बिस्तारै शरीरले प्रत्यारोपित अंगलाई चिन्न थाल्ने हुँदा फेरि समस्या सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रत्यारोपणको १२ वर्षपछि यस्तै समस्या देखिएपछि सिलसिलेवार रुपमा समस्या देखिन थालेको विशेषज्ञ चिकित्सकको भनाइ छ ।
प्रत्यारोपित अंगलाई रिजेक्ट गर्न शरीरले एन्टिबडीको उत्पादन बढाएपछि गत भदौमा उनको सिंगापुरमा प्लाज्मा फेरोसिस पद्धतिमार्फत एन्टिबडी निष्कासन गरिएको थियो । यद्यपि, त्यसको एक–डेढ महिनापछि नै मिर्गौलाले आवश्यक मात्रामा काम नगर्दा शरीरमा हानिकारक तत्त्व क्रियटाइनको मात्र बढेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई डायलाइसिस आवश्यक परेको हो । चिकित्सकका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीमा नियमित डायलाइसिस वा पुनः प्रत्यारोपणको मात्र विकल्प छन् । यसमध्ये हालका लागि पहिलो विकल्प अख्तीयार गरिएको हो ।
Tags: डायलाइसिस, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली